Daa'uud Xirsi - Wikipedia
Aas aasihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
Maajo 1924 ( 96Jir)
Mareeg Galguduud Soomaaliya
Abriil 1969 ( 1956–1957 jir)
Muqdisho (Qabuuraha Ciidanka xoogga)
Ka howl gala/Qaybta
Xooga Dalka soomaaliya
Hogaanka guud ee ciidamada qalabka
Saraakiil Talyaani iyo Ruush
General. Daauud Cabdulle Xirsi (1924-1965) wuxuu ahaa Janaraalkii ugu horeeye ee yeelato Soomaaliya isla markaasna ahaa taliyihii ugu horeeyey ee Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed. Janaraal Daauud wuxuu ku dhashay tuulada Mareeg ee ka tirsan gobolka Galguduud ee dalka Soomaaliya halkaas oo uu ku dhameeye aqoontiisa Qur'aanka asagoo da' yar ah. Mudo sanad ah asagoo ka shaqaynayaa xaafiiska Talyaaniga ee degmada Buuloburde ayuu wuxuu u gudbay magaalada Muqdisho, xoogaa kahor intaan la gaarin Dagaalkii Labaad ee Aduunyada. 1943dii wuxuu ku biiray Ciidamada Booliska ee Ingiriiska oo markaas hayste koonfurta Soomaaliya, Janaral Daauud waxaa uu ka gaare shaqadiisa ilaa barre (macalin) tababare ka ah Dugsiga Booliiska ee Xamarjajab.
Taliyihii ugu horeeye[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dagaalkii labaad ee Aduunka kadib, horaantii 1950meeyadii ayaa taliskii Talyaaniga ku soo noqde koonfurta Soomaaliyaayaa Janaraal Daauud ku guulayte imtixaan uu u galay leyli sarkaal. Waxaana loo qaaday dalka Talyaaniga halkaas oo uu ku soo dhamaystey tababarkii ciidan ee sarkaalnimada.
1954kii ayuu ku soo laabtay Soomaaliya, wuxuuna ku shaqeynayay sarkaalnimo dhinaca booliiska kadibna wuxuu ka qeyb galay diyaarintii ciidammadii Xooga Dalka Soomaaliyeed oo ay markaas abaabulaysey dowladii ee uu horkacaaye Cabdullaahi Ciise. Xeerkii lagu dhisay Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ayaa darajadda Janaraalka ah u dalacsiiyay Daauud Cabdulle Xirsi oo noqday taliyaha Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ee ugu horeeyey. waxa uu noqday janaraaldaauud taliyihii ugu da,da yaraa taariikhda soomara ee maamula ciidanka qaranka .sidoo kale waxaa lagu xasuustaa janaraal daa,uud cabdulle xersi in uu soo saaray dadka ugu magaca dheer xaga ciidanka sida (( j maxamed nuur gallaal ,j macamed faarax caaydiid , col c/laahi yuusuf axmed ,j c/raxmaan mujrim /j c/raxmaan siigeeyste , j maxamed liiqliiqato )) iyo in kale oo badan . sidoo kale waxa uu taliye u ahaa kana soo hoos shaqeeyay ee ugu horeeyay (Gen Maxamed Abshir Muuse) iyo (Gen Maxamed Mali Samatar),Gen Salaad Gabeyre , Gen Gorgor ))iyo ((Gen Maxamed Siyad Barre )) oo mar aha madaxweynihii dalka soomaaliya. oo in toodaba sheegeen in eey ka istafiidiin aqaan dheeraad ah ,
Nasiibxumose, Allahaa u naxariistee Janaraal Daauud Cabdulle Xirsi wuxuu ku geeriyoodey magaalada Moosko ee dalka Ruushka calanka Soomaaliyeed oo aan shan jirsan, asagoo jira 41 jir, dabadeed waxaa xilka loogu wareejiyey saaxiibkiisa Salaad Gabayre, Allaha unnaxariisto.
General. Daa,uud C/llahi xirsi waxa uu ku dhasahay Mgaalada Mareeg ee Burburta ee hoostagtag Magalada Ceeldheer Ee gobolka Galgaduud sanadkii 1924 waxa uu ahaa Ninkii ugu horeyay ee oo magaaacabo General somalia, waxaa xilkaas u magaacaya Raisulwasaarihii XiligaasCabdullaahi Ciise Maxamuud.
Jenanka waxaa uu ahaa qof diinta ku wanaagsan oo baari ah, kuna dadaala runta, waxaana la sheegay inuusan dadka jidka ku dhaafi jirin, isagoo hore u qaadi jiray maadaama uu watay baabuur ahaana sarkaal sare, iskama dhowri jirin dadka shicibka ah. Generalka wxaa uu guula la taaban karao ka gaaray Dagaalki somalia ay la gashay Ethopia Sanadii 1964 Markaas oo loo aqoonsaday Halgamaa Hal ku Dhig leh oo aad loo Xurmeeyo. Dhanka kale waxaa Jira qabuuro loogu Magacdaray Ganeralka o la yiraah General Daa,uud oo ku Yaala Dagamada Wardhiigleey ee Gobolka Banaadir iyo sidoo kale wadada Jen Daa'uud iyo weliba iskoolada Dhexe & sare ee Jen: daa'uud oo iyaguna ku yaal degmada yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Waxaa intaas dheer in jenanku ay jeclaayeen ciidamadii Soomaaliyeed, maadaama uu aad ugu dadaali jiray noloshooda. Generalka aad ayaa looga xushmaayaa Soomaaliya oo idil Xataa Xiliyadii uu Noolaa wax uu quudin jirey dadka Tabarata Yar ee soo beegsaday xiryaha ciidamada oo uu oran jirey waxa Walba oo aad aragataa oo aala Xiarayaha ciidamada Waa Cuni kartaan.
laakiin taariikhda qaarbaa dhigaysa in xilka uu kala wareegay Fashiistihii dhiigyacabkii Maxamed siyaad barre ee soomaali hooga iyo burburka u horseeday Allahu Yarxam .
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Daa%27uud_Xirsi&oldid=205944"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Sebteembar 2020, marka ee eheed 09:02.